Isindululo somtshato-Yonke into oyifunayo ukuyichitha ngosuku olukhulu | Bezzia
USusana godoy | 13/01/2022 16:00 | Umtshato
Ukubhiyozela isicelo sakho somtshato sesinye sezithethe ezikhulu ezisalandelwa nanamhlanje. Nangona kuyinyani ukuba iprotocol ayisafani nangaphambili. Ukongeza, kuya kuhlala kukuthanda kwesi sibini, kodwa nangona kunjalo, siya kukunika uluhlu lweembono ukuze ukwazi ukucwangcisa ixesha isindululo sakho ngokweenkcukacha ezinkulu.
Ngenxa yokuba xa sibhengeza umtshato wethu, kuhlala kukho amaxesha akhethekileyo kwaye ayizizo zonke eziwela ngosuku olukhulu. Yiyo loo nto sinokuyonwabela kunye nabantu bethu inyathelo ngalinye esilithathayo. Amanyathelo avuyisayo esihlala sifuna ukwabelana ngawo kwaye yiyo loo nto isindululo sakho singazukushiywa ngasemva.
1 Sithini isiphakamiso sesandla
2 Kwenziwa ntoni kwisiphakamiso
3 Yintoni ukunika isibini
4 Kude kube nini ngaphambi komtshato
Sithini isiphakamiso sesandla
Ngamanye amaxesha singafumana isuntswana lesiphithiphithi kunye nesindululo kunye nomzuzu wokucela umtshato. Kuyinyani ukuba isibini ngasinye sinezimvo kwaye ezo zezo ekufuneka sizifezekise, kuba akusekho mgaqo olandelwayo njengakudala. Ukuqala koku, kuyinyaniso ukuba ukucela umtshato ngumzuzu othile xa enye inxalenye yesibini ibhengeza kwaye yenza eso siphakamiso sibalulekileyo. Kodwa isiphakamiso ngomnye umzuzu wokubhiyozela, wokuhlangana nabantu obathandayo apho isicelo sibhiyozelwa. Kudala ke yayiyinkqubo entsonkothileyo, kuba yayingumkhwenyana owayedla ngokucela 'imvume' kuyise womtshakazi ukuba atshate. Apho iintsapho zaba nelizwi lokugqibela. Namhlanje yonke into itshintshile yaba ngcono!
Kwenziwa ntoni kwisiphakamiso
Sele icacile kuthi lonto litheko, nangona lincinci kunomtshato. Abazali kuphela, abantakwabo okanye usapho olusondeleyo Iya kuba nguye oza kuye. Ke ngoko, unokuhlala ugcina indawo kwindawo yokutyela entle okanye ulungiselele itheko lasekhaya apho iindwendwe ziya kuxabisa. Yintlanganiso kwaye oku akufanele kube kufutshane nomtshato ngokwawo, ngaphezu kwayo nantoni na ukuze isinike ixesha lokucwangcisa enye kunye nezinye ngaphandle kwengxaki. Xa unendawo, unokuyihobisa ngendlela elula kunye neyothando, ngeentyatyambo kunye neevasi zesiganeko. Ngendlela efanayo, unokukhetha imenyu eyahlukileyo, uhlala uhlangabezana neemfuno zesidlo ngasinye. Ukongeza kwisidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa, kukho ukutshintshiselana ngezipho phakathi kwesi sibini.
Yintoni ukunika isibini
Sele sisazi ukuba xa kusenziwa isicelo somtshato umsesane nguye okhoyo. Ke ngoko, ngalo mzuzu sinokushiya ezinye iinketho. Ngokomzekelo, kuye kunokuba njalo iwotshi yakudala okanye i-smartwotshi, ezinye iicufflinks, uhlobo oluthile lwento ayiqokelelayo, njl. Ngelixa kuye unokukhetha ubucwebe ngendlela yezacholo, i-necklace okanye i-choker kunye namacici. Kodwa mhlawumbi ezinye izinto ezinje ngebhanti entle okanye izihlangu zinokukothusa. Ungatsiba yonke iprotocol kwaye ukhethe umbono omothusayo!
Kude kube nini ngaphambi komtshato
Ngaphambi kokuba sikhankanye ukuba kwakungasondeli kakhulu emtshatweni, ukuba ufuna ukwenza into yokuqala kwaye unokuninzi omele ucwangcise. Kodwa xa sithetha ngokubanziokanye ngaphezulu kucetyiswa ukuba malunga 4 okanye 6 iinyanga kudlula isindululo emtshatweni. Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha iba yinto eyahlukileyo kakhulu okanye eyahlukileyo. Kuba kuya kuxhomekeka kwisibini ngasinye. Kwabaninzi kubo abasayi kukhetha le ngongoma kwaye nangona kukho isicelo somtshato baya ngqo emtshatweni. Ngaba ungathanda ukufumana isindululo sakho ngokwesitayile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umtshato » Bhiyozela isindululo sakho ngendlela!
Yintoni isurimi kwaye yenziwe ngantoni?